China Industrial Gelatin ifektri abakhiqizi | Yasin
Kuyini i-technical gelatin / fihla glue?
I-Industrial technical Gelatin yiprotheni etholakala ku-hydrolysis ye-collagen eyingxenye yamaprotheni ayizikhumba zezilwane, izicubu ze-collagen. Kuyigreyule eliphuzi elikhanyayo, ingcina enhle eyimbudumbudu elula ukuncibilika emanzini. Izinto zokusetshenziswa ezisetshenziselwa ukukhiqizwa zitholakala esikhunjeni sezilwane noma emathanjeni. I-Gelatin yezimboni ivame ukusetshenziselwa ukwenza amabhola okupenda, ifolishi, iphepha elihuqayo lekhwalithi ye-gauze, indwangu epholile uketshezi, okwakha isitayela sejeli. I-viscosity yayo ibaluleke kakhulu, futhi isebenza njengepharamitha ebalulekile.
I-Gelatin Yezimboni Yezimboni
Jelly Amandla Ukuqhakaza 50-250Ukuqhuma
Umthamo (6.67% 60 ° C） mpa.s 2.5-5.5
Umlotha % .52.5
Ingqondo Esindayo mg / kg ≤50
Ishadi Lokugeleza Le-Gelatin Yezimboni
• I-INDUSTRIAL GELATIN ingumbala ophuzi okhanyayo, onsundu noma onsundu, ongadlulisa isisefo esijwayelekile esingu-4mm.
• Iyinto eguquguqukayo, e-brittle (lapho yomile), cishe into eqinile enganambitheki, etholakala ku-collagen ngaphakathi kwesikhumba namathambo ezilwane.
• Kuyinto ebalulekile yokusetshenziswa kwamakhemikhali. Isetshenziswa kakhulu njenge-ejenti ye-gelling.
• Ngokwezibalo ezingaphelele, i-gelatin yezimboni izicelo ezahlukahlukene ngenxa yokusebenza kwayo, ezimbonini ezingaphezu kuka-40, kunezinhlobo ezingaphezu kuka-1000 zemikhiqizo ezisetshenziswayo.
• Isetshenziswa kakhulu ekunamathiseleni, i-jelly glue, umentshisi, ipeyinti, uketshezi lokufaka, ukupenda, i-sandpaper, izimonyo, ukunamathela kwezinkuni, ukunamathela kwencwadi, ukudayela kanye ne-ejenti yesikrini sikasilika, njll.
IGelatin isetshenziswa cishe kuyo yonke indawo njengesibopho senhlanganisela eyinkimbinkimbi yamakhemikhali asetshenziselwa ukwakha inhloko yomentshisi. Izici zomsebenzi ongaphezulu we-gelatin zibalulekile ngoba izici ze-foam zekhanda lomdlalo zinomthelela ekusebenzeni komdlalo ekushiseni
I-Gelatin isetshenziselwa ukulinganisa ubukhulu bamanzi namaphepha wokumboza. Kuphakathi kokuthi kusetshenziswe wedwa noma ngezinye izinto zokunamathisela, ukumbozwa kwe-gelatin kudala indawo ebushelelezi ngokugcwalisa ukungapheleli okuncane okukhona okuqinisekisa ukuveliswa kokuphrinta okuthuthukile. Izibonelo zifaka phakathi izingqwembe, amakhadi okudlala, iphepha lodonga, namakhasi kamagazini acwebezelayo.
I-Gelatin isetshenziswa njengesibopho esiphakathi kwento yephepha nezinhlayiya ezicasulayo ze-sandpaper. Ngesikhathi kwenziwa ukwesekwa kwephepha kuqala kufakwe isixazululo se-gelatin esiminyene bese kuthelwa ngothuli olumunyu losayizi wezinhlayiyana odingekayo. Amasondo abrasive, amadiski namabhande nawo alungiswa ngokufanayo. Ukomiswa kukahhavini nokwelashwa kokuxhumanisa kuqeda inqubo.
Emashumini ambalwa adlule okunamathiselwe okususelwa ku-gelatin kuye kwathathelwa indawo kancane kancane kwenziwa izinhlobo ezahlukahlukene zokwenziwa. Muva nje, noma kunjalo, ukutholakala kwemvelo kwemvelo kwama-gelatin adhesives kuyenzeka. Namuhla, i-gelatin iyinamathelisi ekhethwayo ekubekweni kwamakhadibhodi okubopha nokufaka uphawu lukathayela.
25kgs / isikhwama, eyodwa poly isikhwama kwangaphakathi, nokwelukiweyo / okwakhiwa isikhwama yangaphandle.
1) Nge-pallet: isitsha esingu-12 metric tons / 20 feet container, 24 metric tons / 40 feet container
2) Ngaphandle kwepallet:
okwe-8-15 mesh, isitsha esingu-17 metric / 20 feet feet, container 24 metric / 40 feet container
Ingaphezulu kwama-20 mesh, 20 metric tons / 20 feet container, 24 metric tons / 40 feet container
Ukugcina endaweni yokugcina izinto: Kulawulwe kahle umswakama ongaphakathi kwe-45% -65%, izinga lokushisa ngaphakathi kuka-10-20 ℃
Layisha esitsheni: Gcina esitsheni esivaliwe, sigcinwe endaweni epholile, eyomile, enomoya.